किन गरे गाउँलेले प्रहरी चौकीमा आक्रमण जिल्ला सुरक्षा समितिको टोली घटना स्थल – Enayanepal.com
किन गरे गाउँलेले प्रहरी चौकीमा आक्रमण जिल्ला सुरक्षा समितिको टोली घटना स्थल
२०७३, १९ कार्तिक शुक्रबार मा प्रकाशित
सुर्खेत माओवादी सशस्त्र युद्धका वेला प्रहरी चौकी कब्जा गरिएका घटना सार्वजनिक हुन्थे । बृष्तृत शान्ति सम्झौता पछि भने त्यस्ता घटना विरलै सुनिन्थे तर मंगलबार (भाइटिका) को साँझ पूर्वी सुर्खेतको एउटा प्रहरी चौकीमा द्वन्दकालकै झल्को दिने घटना भएको छ ।
जहाँ प्रहरी चौकी नै कब्जा गरी द्वन्दकालिन माओवादी शैलीमा हतियार कब्जा गरिएको छ । पूर्वी सुर्खेतको आग्री गाउँमा रहेको देउती प्रहरी चौकीमा स्थानीय नागरिकहरुले द्वन्दकालिन शैलीमा प्रहरी चौकी कब्जा गरी हतियार पनि कब्जा गरेका छन ।
द्वन्दकालकै झल्को दिने गरी भएको घटना किन भएको हो भन्ने खास कारण नखुलेको भएपनि स्थानीय र प्रहरीले आआफ्नै बचाउ गरिरहेका छन् ।
स्थानीय एक जना नागरिकका अनुसार प्रहरी र स्थानीय युवाहरुबीचको दुस्मनीका कारण यो घटना भएको हो । पहिले संगसंग बसेर मदिरा सेवनसमेत गर्ने तर पछि सम्बन्ध विग्रिएपछि स्थानीय युवाहरुले प्रहरीसंगको दुश्मनि साध्न प्रहरी चौकी मै आक्रमण गरेका हुन् ।
प्रहरीले स्थानीय मदिरा सेवन गरेका युवाहरुले प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेको दावी गरेको छ । स्थानीय मदिरा सेवन गरेका युवाहरुले प्रहरी चौकीमा घरेलु हतियारसहित आक्रमण गरी प्रहरीका हतियारहरु र अन्य उपकरणहरु कब्जा गरेका थिए ।
सुरुमा केही मदिरा सेवन गरेका युवाहरुले चौकीमा आक्रमण गरेको र पछि स्थानीय नागरिकहरुको त्यहाँ ठुलो उपस्थिति रहेको जनाइएको छ ।
आग्रीगाउँसँग सीमा जोडिएको काफलकोटका युवा र प्रहरीबीच विवाद उत्कर्षमा पुगेपछि घटनाले उत्तेजक रुप लिएको जनाइएको छ ।
स्रोतका अनुसार स्थानीय युवाले तास हारेपछि एक जना प्रहरी जवानसँगै मदिरा सेवन गरेका थिए । तास हारेकै विषयमा स्थानीय युवा उत्तेजित भएपछि प्रहरी चौकी आक्रमण उत्रेको बताइएको छ ।
आक्रमणकारी गाँउलेको समूह चौकीमा पुग्दा चौकीका इञ्चार्ज प्रहरी सहायक निरीक्षक (असई) मनोज आलेको कमाण्डमा चारजना प्रहरीमात्र थिए ।
देउली चौकी सदरमुकाम वीरेन्द्रनगरदेखि १ सय ५ किमी टाढा पर्दछ । स्थानीयले चौकी तोडफोड गर्नुका साथै हतियार, गोली, हत्कडी लगायतका उपकरण कब्जामा लिएका थिए ।
गाउँलेहरुले थ्रिनट थ्री राइफल, एकथान चाइनिज पेस्तोल, एक सय ५० राउन्ड गोली, हत्कडी कब्जा गरेका थिए । ती सामानहरु खोला किनार र घरमा फेला पारेको प्रहरीले दावी गरेको छ ।
घटनाका बारेमा जानकारी पाएपपिछ मंगलबार राति नै जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख,प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) मोहन आचार्य, डिएसपी बहादुरजंग मल्लसहित थप सुरक्षाकर्मीको टोली घटनास्थल पुगेको थियो ।
प्रहरीले स्थानीय युवाले लुटेका हतियारहरु बरामद गरिसकेको दावी गरेको छ । तर यस घटनाका बारेमा थप जानकारी भने दिएको छैन । घटनाका बारेमा बुझ्न सुर्खेतका प्रमुख जिल्ला अधिकारी राजकुमार श्रेष्ठ पनि देउली पुगेका छन् । त्यहाँ पुगेर के गरियो भन्ने बारेमा भने कुनै जानकारी दिइएको छैन ।
घटना स्थलमा पुगेका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र एसपीको मोवाइल नं.अफ गरिएको छ । डिएसपी बहादुरजंग मल्लको मोवाइल नं. अन भएपनि उनले यस विषयमा एसपीसंग बुझ्नुपर्ने जवाफ दिएका छन् ।
प्रहरीले घटनामा संलग्न ७ जनालाई पक्राउ गरिसकेको छ । पक्राउ पर्नेहरुमा काफलकोट गाविस वडा नं. ९ का केशरसिंह ठकुरी, प्रेम खत्री, तीर्थबहादुर खत्री, तिलक सिंह, चित्रबहादुर केसी, चन्द्रबहादुर सिंह लगायत रहेका छन । उनीहरु बाहेक अन्यलाई पनि प्रहरीले पक्राउ गरको हुन सक्ने स्थानीयले बताएका छन् । तर प्रहरीले भने कसलाई पक्राउ गरिएको भन्ने जानकारी पनिदिएको छैन ।
स्थानीय नागरिकहरुले प्रहरीले केही निर्दाेष विद्यार्थीहरुलाई पनि पक्राउ गरेको दावी गरेका छन् । घटना प्रहरी र युवाहरुको बीचको दुश्मनिले भएको तर प्रहरीले केही विद्यार्थीहरुलाई पनि पक्राउ गरेको स्थानीयको भनाई छ ।
स्थानीय युवाहरुका पक्षले प्रहरीको आचरण गलत भएका कारण घटना भएको दावी गरेका छन् ।